Cadaadis iyo Nolol caafimaad leh | Caafimaadka Maskaxda Texas
Cadaadisku waa sida maskaxdeena iyo jidhkeenu uga jawaabaan dalabaadka. Nooc kasta oo dhacdo ah, ha ahaato mid togan ama mid taban, waxay sababi kartaa culeys, diiqaduna waa qeyb ka mid ah nolosha qof walba ilaa xad. Cadaadiska waxaa caadi ahaan loo arkaa inuu yahay mid waxyeello leh, laakiin dhab ahaantii, walbahaarka oo dhan ma xuma. Tusaale ahaan, waxay dadka ku dhiirrigelin kartaa inay qabtaan hawlo adag.
Cadaadisku wuxuu saameeyaa wax badan oo aan ahayn sida aan dareemayno oo keliya. Waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka jirkeena sidoo kale. Mid ka mid ah tan ayaa ah madax xanuunka dhanjafka, ama “madax xanuun walaac leh.” Cadaadisku sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelan karaa rabitaanka cuntada, hurdada, wuxuu kordhin karaa dhiig karkeena, iyo waxyaabo kaloo badan. Muddo dheer ama cadaadis daba-dheer ayaa saameyn ku yeelan kara nidaamkayaga wadnaha, difaaca jirka, dheef-shiidka, iyo nidaamka caloosha. Nasiib wanaagse, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo lagula qabsado walaaca. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay si fiican kaaga shaqeeyaan marka loo eego kuwa kale, laakiin dhammaantood waxay naga caawin karaan inaan culeyska u qaadno si caafimaad leh.
Waxyaabaha fudud ee aad sameyn karto markii aad dareento culeys maskaxeed waxaa ka mid ah:
Inaad qof kala hadasho waxa aad dareemeyso
Ku xirnaanshaha dadka aad daryeesho ee adiga kaa daryeelaya
Sameynta wax xiiso leh
Firfircoonaan jir ahaaneed
Isku dayida inaad hesho hurdo kugu filan
Haysashada cunto caafimaad leh, oo dheellitiran
Helitaanka hawo nadiif ah
Caawinta dadka kale
Kani waa liis kooban oo waxaa jira siyaabo kale oo badan oo si fiican loola tacaalo diiqada. Fiiri ilaha kale.
10 Siyaabood oo Fudud oo lagu yareeyo walwalka.
Maareynta Cadaadiska Cadaadiska: Sida loo Yareeyo, Looga Hortago, oo loola Qabto Cadaadiska.
Siyaabaha loo Maareeyo oo loola Qabsado Cadaadiska.
Tilmaamaha Kaqeybgalaha ee Maareynta Cadaadiska.
Haddii maaraynta culeyska kaligiis uusan kugu filneyn, raadso caawimaad! La hadal xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka. Haddii aad ogaatid in culeyska fekerku uu si xun u saameynayo caafimaadkaaga guud ama cilaaqaadkaaga, waxaa jira daaweyn badan oo wax ku ool ah